Onye njem ụgbọelu nke America na-agba mbọ imeghe Midflight, Onye na-agba ụgbọ elu na-ata ahụhụ, wee banye oche ya.
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Onye njem ụgbọelu nke America na-agba mbọ imeghe Midflight, Onye na-agba ụgbọ elu na-ata ahụhụ, wee banye oche ya.
Airlines • Airport • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Onye njem ụgbọ elu America na-agba mbọ imeghe ụzọ midflight, na-ata onye na-agba ụgbọ elu, na-agbanye oche ya
Nwanyị ahụ na-enwe nkụda mmụọ na-akọ na ọ kwụsịrị n'oche ya wee nwaa imepe ụzọ nke ụgbọ elu ahụ n'etiti midlight.
Nwanyị ahụ “na-adịghị mma” malitere 'ịna-ewekarị iwe, na-emekwa mkpọtụ.'
“Nchebe nchebe nwere ike” chọrọ ka ndị ọrụ ụgbọelu ahụ mee ihe.
N'agbanyeghị oke ihe eji egbochi ya, nwanyị ahụ kwuru na ọ na-ekwu okwu rụrụ arụ n'oge ụgbọ elu ahụ niile.
American ụgbọ elu ụgbọ elu si Dallas, Texas ruo Charlotte, North Carolina batara ngwa ngwa n'ime ihe ahụ mgbe otu nwanyị nọ n'ụgbọ ahụ malitere ịtụgharị na nwoke njem nọ n'akụkụ ya na ọ chọghị ka ụgbọ elu ahụ "kwụpụ ọzọ."
Dị ka otu onye njem nọ n'ụgbọ elu ahụ si kwuo, nwanyị ahụ bụ "onye ọhụụ" bidoro na-ewekarị iwe ma na-ada oke ụda, nwoke ahụ nọ n'akụkụ ya, ya na ndị ọrụ ụgbọ elu ahụ, ji obi ọma gbalịa ịkasi ya obi ma mee ka ọ daa jụụ, mana onweghi ihe gara. ”
Nwanyị ahụ na-enwe nkụda mmụọ, nke a kọwara dị ka afọ 30 na ntutu isi na-acha akwụkwọ ndụ, kwuru na ọ kpọchiri oche ya wee nwaa imepe ụzọ ụgbọelu ahụ. Ndị na-ejere ya ozi gbagburu ya ngwa ngwa, bụ ndị jidere aka ya na ụzọ aghụghọ na zip zip, dị ka onye hụrụ ihe nọ n'ụgbọ ahụ kwuru.
Mgbe ahụ, a gwara ndị njem nọ ọdụ n’ahịrị n’ihu na n’azụ nwanyị ahụ na-arịa ọrịa ka ha pụọ ​​n’ụzọ ka ndị na-agba ụgbọ elu wee nwee ike duzie ndị ahịa ahụ na-adịghị mma n ’oche ya.
Dị ka otu onye njem si kwuo, onye ọkwọ ụgbọ elu ụgbọelu ahụ banyere na intercom ma gbaa ndị mmadụ ume ka ha nọrọ ọdụ n'oche ha dịka ndị ọrụ na-ahụ maka "ọnọdụ ọjọọ na ụgbọ elu ahụ," na-akọwaghị n'ihu.
American ụgbọ elu mechara gosipụta ihe ahụ dị ịtụnanya wee gbachitere ya Hollywood-esque nche usoro, na-akọwa na a "nwere ike nche nche" chọrọ ka ndị ọrụ ụgbọ elu ahụ mee ihe. Onye na-ebu ụgbọelu gosikwara na nwanyị ahụ “merụrụ ya arụ ma taa ya arụ” otu n'ime ndị na-agba ụgbọ elu.